Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1404
Fanarenana fotodrafitrasa : singa iray jerena ny kalitaon’ny simenitra sy vy
Par Taratra sur 07/04/2016 Economie, NS Malagasy
Maro ireo fotodrafitrasa mila fanarenana, lalana, tetezana, tranom-panjakana, sns. Efa nitondran’ny teknisianina fanazavana fa ny lalana vita amin’ny simenitra, maharitra kokoa noho ny vita amin’ny godorao. Maro ireo lalana migodana vita amina karazana simenitra any ivelany any. Natao izy ireny mba hisian’ny fotodrafitrasa matanjaka sy maharitra. Manoloana izany, ilaina fanazavana manokana ny avy amin’ny Bureau […]
FMI-Banky iraisam-pirenena : hanatrika fivoriana any Washington ny solontena malagasy
Hisy delegasiona avy aty Madagasikara, hanatrika ny fivorian’ny FMI sy ny vondron’ny Banky iraisam-pirenena ny 15 hatramin’ny 17 avrily ho avy izao any Washington. Ao anatin’ny fandaharam-potoana mandritra izany fivoriana izany ny politika fanarenana ny toekarena eto Madagasikara, haroso hodinihin’ireo teknisianina samihafa avy amin’ny FMI sy ny Banky iraisam-pirenena. Isan-taona, isaky ny fivoriana toy izao, […]
Fiaraha-miasa amin’ny egyptianina : hiofana amin’ny ady amin’ny fampihorohoroana ny polisy malagasy
Hanamafy ny fiaraha-miasa efa nisy hatramin’izay ny polisim-pirenena malagasy sy ny polisy Egyptianina ary hasiam-panavaozana ho amin’ny tsaratsara kokoa hatrany izany. Egypta rahateo no isan’ireo firenena lohalaharana amin’ny fandraisana polisy Malagasy mandeha miofana any amin’izy ireo. Manoloana ny ady amin’ny asa fampihorohoroana, hofanin’ny Egyptianina ny polisy malagasy. Ireo no voaresaka nandritra ny fitsidihana ara-pomba fifanajana […]
Par Taratra sur 07/04/2016 En Bref, NS Malagasy
Hivoaka rahampitso ny didim-pitsarana momba fifampitorian’ny mpanao gazety Riana Rasoava sy ny mpandraharaha iray. Nolavin’ity mpanao gazety ity avokoa ny fiampangana azy raha nandà toy izany koa ilay mpandraharaha. Ho fantatra rahampitso ny onitra angatahin’ny mpitory amin’ity raharaha ity. Velon-taraina ny ankamaroan’ireo olona sasany fa misy mpisoloky ny ankamaroan’ireo mpividy volamena tsy ara-dalàna eo Analakely. […]
Efa mpamerin-keloka… : jiolahy roa nidoboka eny amin’ny fonjan’Antanimora
Tsy mety fay! Nidoboka avy hatrany eny amin’ny fonjan’Antanimora, omaly indray ireo jiolahy roa efa mpamerin-keloka izay voarohirohy ho mpanao sinto-mahery eny 67 ha… Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny poste de police Antaniavo, ny asabotsy 2 avrily 2016 tamin’ny 11 ora alina tao Antohomadinika, ny jiolahy roa antsoina hoe Arinesy, 24 taona sy […]
Hafari Malagasy : haparitaka manerana ny Nosy ny Jivima
“Tanjona efa napetrakay hatramin’izay ny hananan’ny vahoaka malagasy jiro isan-tokantrano. Sarotra anefa izany satria ny fahefa-mividy eo amin’ny tsirairay tsy mitovy ka nahatonga anay hanao fikarohana manokana ka nahavita ny Jivima”, hoy ny talen’ny Jivima (Jiro Vita Malagasy) Ramiandrisoa Andrinirina, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, ny herinandro teo. Nohamafisiny manokana fa mahazaka ny […]
Nanao fanambarana teny amin’ny fonjan’Antanimora omaly, ireo sendikan’ny mpandraharaha ny fonja, nanamafy ny fitakian’izy ireo. “Raha tsy mahazo valiny amin’ny fanjakana foibe ao anatin’ny 72 ora izahay, hanao fitokonam-be manomboka ny alatsinainy izao”, hoy izy ireo. Voalaza fa fitakiana efa tamin’ny volana janoary ireo, efa nisy ny fifanarahana teo amin’izy ireo sy ny ministera mpiahy, […]
Miteraka savorovoro eo amin’ny mponina eny Anosizato ny famaritan’ny olona iray ny lalana RN1 taloha eny an-toerana. Arabe ambadiky ny FJKM mivoaka any Anosizato io. “Mbola miasa io lalana io, ary ampiasain’ny mponina. Nanorin-trano amoron’io arabe io ny ray aman-dreninay efa hatramin’ny taona 1940 tsy nisy olana ary tsy nesorin’ny fanjakana. Ankehitriny, misy milaza ho […]
Lalana tsy azo hohanina io…
Par Taratra sur 07/04/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Feno ny kapoaka eny Ambohipo noho ny haratsian’ny lalana. Nihetsika ny mpampiasa lalana ka taitra ny mpitondra. Mimenomenona ireo taraiky anaty fitohanana noho ny fanamboaran-dalana. Matahotra ny ho rava fonenana ireo mipetraka manamorona ny lalana hitarina. Manahy tsy hanana lalana voatokana ireo mpandeha an-tongotra eny Behoririka, noho ny fanitarana ny lalana. Tsy manaiky ny hikitihana […]
Par Taratra sur 07/04/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Tsy ny eny Ivato ihany. Nidina an-dalambe nilanja sora-baventy koa ireo mponina eny Andohan’i Mandroseza, omaly. Tsy eken’izy ireo ny handravana ny tranony noho ny fanamboaran-dalana atao eny an-toerana. Nitondra fanazavana sy nampitony azy ireo ny delegen’ny boriborintany eny an-toerana. Mafampana indray ny eny Andohan’i Mandroseza. « Ilaina ny hanamboarana ny lalana nefa tsy ekenay […]
Rugby – «Mada 2016» : hanomboka, anio, ny fihaonana ho an’ny D2
Par Taratra sur 06/04/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Hotanterahina manomboka anio eny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, ny fifaninanam-pirenena eo amin’ny sokajy D2, ho an’ny taranja rugby. Faritra telo no handray anjara sy hiady ny anaram-boninahitra amin’izany: i Betsiboka, Itasy ary Matsiatra Ambony. Hifandimby hihaona ireo ekipa ireo ka manao ny famaranana ny roa voalohany, ny alahady 10 avrily izao. Ny 9 avrily izao […]
Volley : mampiofana eto Madagasikara i Georges Appadoo
Raikitra. Nanomboka, omaly hatramin’ny 8 avrily izao etsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano, ny fiofanana mpanazatra “niveau I” eo amin’ny taranja volley. Hetsika karakarain’ny federasiona malagasy (FMVB) iarahana amin’ny federasiona iraisam-pirenena (FIVB). Araka izany, ilay Maorisianina, manampahaizana iraisam-pirenen’ny FIVB, Georges Appadoo, no mitarika ny fiofanana amin’izany. Manodidina ny 30 eo ho eo kosa ireo mpanazatra malagasy manaraka […]
Lutte : indroa resy tany Alzeria i Faly Hery
Tsy mbola manana solontena ho any Brezila, amin’ny fiatrehana ny “Lalao olympika” (JO 2016), ny taranja tolona (lutte) malagasy. Resy teo amin’ny fiadian-toerana, ho an’i Afrika, mantsy i Faly Hery. Tsy namokatra Randrianantoandro Faly Hery, nandritra ny fiadiana ny tapakila hiatrehana ny “Lalao olympika 2016”, hatao any Brezila ny volana aogositra ho avy izao, eo […]
J.O 2016 : nahazo « wild card » Rabetsara Fils Estellah sy Ralefy Anthony
Par Taratra sur 06/04/2016 Divers, NS Malagasy
Mazava. Mandray anjara amin’ny “Lalao Olympika 2016” na J.O 2016 any Rio, Brezila, eo amin’ny taranja lomano i Madagasikara. Notoloran’ny federasiona iraisam-pirenen’ny lomano (Fina) “wild card” na fanasana manokana mantsy isika. Amin’ny alalan-dRabetsara Fils Estellah, eo amin’ny vehivavy, ary Ralefy Anthony eo amin’ny lehilahy no hahafahantsika mandray anjara amin’io hetsika goavana iraisam-pirenena sady faratampony io. […]
Faribolana Sandratra : hanolotra « Vaovao mahafaly » i Avelo-Nidor
Par Taratra sur 06/04/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Masaka ny nahandro ! Hivoaka ny 30 avrily izao ilay boky 100 pejy mirakitra ny sanganasan’i Avelo-Nidor. Hanomboka amin’ny 3 ora tolakandro, amin’ny alalan’ny antsa tononkalo, etsy amin’ny Tranompokonolona Analakely no hanatanterahana ny fampahafantarana ity boky mitondra ny lohateny « Vaovao mahafaly » ity. « Matetika lazain’ny mpamaky fa mampalahelo ny zava-boalazan’ny tononkalo sasany… Tokony hahafaly foana anefa izy […]
Mampahafantatra zava-baovao hatrany ny Institut français de Madagascar (IFM) eo amin’ny tontolon’ny hira sy mozika, amin’ny alalan’ny fanafarana sy fanomezana sehatra mpanakanto avy any ivelany. Ho vahininy, ny zoma hariva izao, ny tarika Saodaj’, avy atsy amin’ny Nosy La Réunion. Tarika anisan’ireo nitondra rivo-baovao sy manaraka ny fivoaran’ny toetrandro eo amin’ny gadona maloya ny Saodaj’. […]
Par Taratra sur 06/04/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Natomboky ny filohan’ny Repoblika Rajaonarimampianina Hery ny tetikasa famatsian-drano fisotro madio any amin’ny kaominina Ankadivoribe, distrikan’Antananarivo Atsimondrano ny alatsinainy teo. Tetikasa AEP volavolain’ny minisiteran’ny Rano ary tanterahin’ny Jirama ity hatao any Ankadivoribe ity. Maherin’ny 50.000 ireo mponina hahazo tombony amin’ity famatsian-drano ity raha ny vinavinan’ny minisiteran’ny rano hatrany. Amin’izao fotoana, mbola ny reniranon’i Mandroseza no […]
Nahazo filazana loko mena tsy ahafahan’ny mpiandriaka mivoaka an-dranomasina intsony omaly ho an’ny morontsiraka atsimo, atsimo andrefana, afovoany andrefana noho ny hamafin’ny onja, araka ny fanambarana avy amin’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Manomboka eo Besalampy, hatrany Farafangana no voakasiky ny filazana. Hanan-kery indray ny filazana loko mena manomboka rahampitso hatramin’ny asabotsy ho avy […]
Afaka dimy taona vao hovoaray ho mpiasam-panjakana avokoa ny mpampianatra Fram 50 000 efa am-perinasa, amin’izao fotoana izao. Eo am-piandrasana izany, tsy miditra an-tsehatra intsony amin’ny Fram vaovao raisin’ny sekolim-panjakana ankoatra ireo ny minisitera mpiahy. Tsy azon’ny EPP na CEG na lycée intsony ny mampiditra mpampianatra Fram vaovao araka ny didy navoakan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ny […]
Tanora tsy tara – Fitondrantena, fahaizana… : tanora feno , tsy mandringa
Manomboka eo amin’ny faha-18 taona hatramin’ny faha-25 taona eo no tena herin’ny fahatanorana. Takian’ny fiarahamonina ankehitriny ny tanora feno amin’ny lafiny rehetra ary tsy tokony handringa na hisy fahabangana. Tsy sarotra fa mila finiavana sy fahambonian’ny toe-tsaina raha te ho tonga amin’ny fahatanorana mahafeno ny filan’ny fiarahamonina. Voalohany amin’izany ny fahaizana mitondra tena. Mahatohitra ny […]
Par Taratra sur 06/04/2016 Economie, NS Malagasy
Misy ary maro ny toerana mety mahaliana ny mpizahatany amin’iny lalam-pirenena voalohany iny. Antony iray nahatonga ny Label Village any Arivonimamo nanokatra ny tolotra iray, ho an’ireo mpizahatany vahiny sy eto an-toerana izany. Nampahafantarina voalohany , ny faran’ny herinandro teo, ny « Circuit touristique pack découverte ». Tsy fitsidihana toerana manan-tantara fotsiny toy ny mahazatra fa fanomezana […]
Hisy ny hetsika tolo-tanana : tsy salama i Pascal Vertigo
Mpanakanto anisan’ireo andrarezina, avy any amin’iny faritra Sofia iny i Pascal Vertigo. Niaraka hatrany tamin’ny Grand maître Tianjama no tena nahafantaran’ny maro azy, hatrany amin’ny taona 1970 tany. Fantatra izao tojo tsy fahasalamana, satria tratran’ny AVC ity mpanakanto ity. “Efa mandeha ny fitsaboana azy. Nifanentana mba hanao tolo-tanana ho an’i Pascal Vertigo izahay, satria aleo […]
Toby fiantsonana : hafindra ny eny Fasan’ny Karana sy Ambodivona
Hafindra toerana tsy ho ela ireo toby fiantsonan’ny kaoperativa mpitatitra eo Fasan’ny Karana sy eny Ambodivona. Ny voalohany, hafindra eny Andohatapenaka, fiaraha-miasa amin’ny Total ary ny faharoa halefa eny Ambohimanambola, tetikasa hiarahana amin’ny Jovenna. Samy hitondra famatsiam-bola ho an’izany asa izany ireo orinasa roa ireo, hanohana sy hanara-maso ny asa ny minisiteram-panjakana misahana ny Fanajariana […]
ITM taona 2016 : fotoana hanatsarana ny tontolon’ny fizahantany
Hatao eto Antananarivo ny 2, 3, 4 jona ny International tourism fair Madagascar (ITM), taona 2016. Tapaka izany noho ny fiaraha-miasa eo amin’ny minisiteran’ny Fitaterana, fizahantany miaraka amin’ny Office national du tourisme. Ny andro voalohany amin’izany, hatokana ho an’ireo mpandraharaha matihanina. Voriana amina toerana iray ireo mpandraharaha rehetra momba izany manerana ny Nosy, amin’ny maha […]
Kaominina Andina-Fianarantsoa : famatsiana herinaratra avy amin’ny riandrano
Nametrahana fotodrafitrasa famatsiana herinaratra avy amin’ny riandrano ny ao amin’ny kaominina Andina, Fianarantsoa. Tetikasa apetraky ny Fondation Tany Meva miaraka amin’ny Vondrona eoropeanina. Tonga tany an-toerana ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Fondation Tany Meva, Ramiandrison Jimmy, nijery ny fizotran’ny asa. Manana tanjaka 80 kw ny apetraka ao Andina ary 120 Kw ny any Andrakefona, avy amin’ny […]
« Précédent 1 … 1 402 1 403 1 404 1 405 1 406 … 1 488 Suivant »